Tsy fidiram-bola: afaka mindrana amin’ny banky tsotra ny fanjakana | NewsMada
Tsy maintsy misy fiantraikany amin’ny fidiram-bolam-panjakana ny krizy fahasalamana ankehitriny. Ankoatra ny fanampiana avy any ivelany, vola miditra andoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana sy ny fampandehanan-draharaha ny fidiran-ketra, raha ny fanazavan’ireo mpahay toekarena. Ny tsy fandehanan’ny orinasa mira volam-panjakana tsy miditra. Farafahakeliny, 15% amin’ny fanampiana no tsy miditra intsony amin’ny fanjakana tao anatin’ny herintaoana.
Sehatra maro ny tsy afaka mihodina, noho ny fikatsoan’ny fivezivezena. Azo antoka, araka izany, fa tsy maintsy sahirana ny fanjakana. Ny hetra no andoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana, ny hetra izay tsy avy aiza fa avy amin’ny orinasa miasa, rehefa mihodina. Koa rehefa tsy afaka miasa ireo noho ny zava-misy amin’izao fotoana izao na miasa tapany, tsy mampidi-bola, tsy mampidi-bola koa ny fanjakana.
Tsy maintsy mindram-bola any amin’ny banky tsy miankina izany fanjakana hampandehanan-draharaha. Eo ny Tahirimbolam-panjakana manana ilay hoe “bon du trésor par adjudication” ahazoana mindram-bola any amin’ny banky, amam-bolana na aman-taona. Iny ny andoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana.
Mbola afaka mindram-bola ny fanjakana fa ny olon-tsotra no tena sahirana amin’izao krizy izao, tsy manana fidiram-bola satria very asa na mihena ny vola miditra aminy. Maro anisa anefa ireny olon-tsotra ireny koa ahoana ny fomba hanampian’ny fanjakana azy? Izay ny tanjona voalohany tokony hojeren’ny fanjakana. Koa tokony hapetraky ny mpitondra ny paikady hiatrehana ny tsy fisiam-bola. Lasa mivarobarotra mameno tanàna no betsaka satria tsy maintsy mitady isan’andro ny olona.